Ny Apple TV amidy indray amin'ny Amazon | Avy amin'ny mac aho
Miverina ao Amazon ny Apple TV
Raha manaraka ny vaovao havoakanay ianao dia ho fantatrao fa andro vitsy lasa izay ny fampiharana Amazon Prime Video dia niseho tao amin'ny magazay fampiharana Apple TV, izay midika fa izao dia afaka mankafy ny serivisy fandefasana horonantsary Amazon ianao amin'ny faralahy ny fianakaviana Apple.
Hatreto dia ny ara-dalàna rehetra raha tsy jerentsika fa roa taona lasa izay dia nijanona tsy namidy tao amin'ny Amazon ny Apple TV mba hahafahany mivarotra ny vokatra. Fire TV toy ny fifaninanana amin'ny Apple TV. Izao dia nandinika indray izy ireo, namorona rindranasa ho an'ny Apple TV vaovao ary nanjary azo vidiana indray.
Androany dia nanambara i Amazon fa ny Apple TV vaovao sy Google Chromecast Hita tao amin'ny fivarotany indray izy ireo ary afaka hampiasa ny rindranasa roa hankafizany ny serivisy fandefasana horonantsary izay ananany manokana. Ny fampiharana dia ny Amazon Prime Video ary miaraka aminy mihidy ny tsingerina fa tamin'io fotoana io dia maimbo fifaninanana hoe iza no nanapaka ny ankamaroan'ity fifanekena ity.
Ny rindranasa noforonin'i Amazon hahafahany mankafy horonan-tsary mivantana dia tsy maintsy mamakivaky ilay boaty Apple ary, mazava ho azy, mandoa ny ampahany amin'ny tombony azon'ny Cupertino na dia tsy tompony aza ity farany. Ireo ny lalàna mifehy sy miasa amin'ny fivarotana fampiharana Apple. Manapaka ny mpamorona, fa Apple kosa manapaka tena tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Miverina ao Amazon ny Apple TV